हाम्रो मुख्य ध्यान नै सम्पदाहरुको पुनःनिर्माण र संरक्षणमा छ : नगरप्रमुख प्रजापति - Palikanews.com
हाम्रो मुख्य ध्यान नै सम्पदाहरुको पुनःनिर्माण र संरक्षणमा छ : नगरप्रमुख प्रजापति
पालिका न्यूज | धर्म सुनार, भक्तपुर
५ माघ २०७७, सोमबार १०:४०
स्थानीय नेवारी भाषामा ख्वप: नामले चिनिने भक्तपुर नगरपालिका उपत्यकाको पूरानो नेवारी साँस्कृतिक केन्द्रको रुपमा चिनिन्छ । भक्तपुर नगरपालिका नेपालको राजधानी काठमाण्डौबाट १५ कि.मी. पूर्वमाअवस्थित छ ।
त्यस्तै भक्तपुरमा कोरानाकालमा भएका विकास निर्माणका कार्यहरु, विश्व सम्पदामा रहेको भक्तपुरमा कोभिड–१९ ले पारेको असर आदि सेरोफेरोमा रहेर भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग पालिका न्युज डटकमका लागि डेक्स सम्पादक धर्म सुनारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
१. अहिले विश्व नै कोरोनाले आक्रान्त छ, यसमा भक्तपुर जिल्ला पनि अछुतो हुन सकेको छैन, यहाँको कोरोनाको अवस्था कस्तो छ र यसको नियन्त्रणको लागि कस्ता कस्ता कदम चाल्नु भएको छ?
यो विश्वव्यापि रुपमै सरोकारको विषय हो । भक्तपुर नगरपालिकामा शुरुमा अलिकति बढी नै प्रभावित नै भएको थियो । त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रणका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न कदमहरु चाल्यो । उदारणका लागि नगरपालिकाले ठाउँ–ठाउँमा प्रत्येक वडामा स्वयमसेवकहरु परिचालन गरेको थियो । प्रत्येक वडामा करीब ५० जना स्वयमसेवकको व्यवस्था गरेका थियौं । त्यसैगरी जनतालाई समस्या नपर्ने गरि हामीले खाद्यान्न, तरकारीको व्यवस्था गरेका थियौं । यो हिसावले सकेसम्म भक्तपुर नगर वासिहरुलाई अप्ठ्यारो नपरोस भन्ने हिसावले हामीले कोभिड–१९ को लागि भनेर विभिन्न समूहहरुसँग पनि समन्वय गरेका थियौं । त्यसैगरी नेपाल सरकारसँग हामीले छलफल गरेर विभिन्न तहमा कुराकानी गरेर कोभिड संक्रमितहरुको लागि भनेर एक आइसोलेसन केन्द्र निमाण गरेका छौं । त्यस पछि संक्रमितहरुको दर बढ्दै गएपछि नगरपालिकाको ७५ बेडको एउटा छुट्टै आइसोलेसन केन्द्र बनायो । आइसोलेसनमा बस्ने सबैका लागि खानाको बन्दोवस्त, औषधि, अनलाइन मार्फत व्यायाम सिकाउने व्यवस्था गरेका थियांै । त्यतिमात्र होइन आइसोलेसनमा बसेकाहरुको निम्ति फिजियोग्राफीहरु, नर्सहरु, डाक्टरहरु, मनोवैज्ञानिकहरुलाई ल्याएर अनलाईन कक्षाहरु संचालन गरेका थियांै । यसरी जो आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ उहाँहरुका लागि अलिकति पनि अठ्यारो नपर्ने गरि एक पैसा पनि खर्च नहुने गरि १४ दिन सम्म बस्ने व्यवस्था मिलाएका थियौं । यसरी ७५ बेडको आइसोलेसन केन्द्रमा ९६ जनाले सेवा लिनुभएको थियो । होम आइसोलेसनमा पनि १०० औँ जनाको संख्यामा बस्नुभएको थियो उहाँहरुको लागि ७२ घण्टाको सरसफाई गर्ने काम गर्यौं । आइसोलेसनमा बस्नेहरुका लागि अनलाईन कक्षाहरु संचालन गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन उहाँहरुका लागि केही अप्ठेरो परेछ भने सम्पर्कको लागि २ जना डाक्टरहरु, तीन जना कर्मचारी गरि जम्मा पाँचजना को व्यवस्था गरेका थियांै । यसरी भक्तपुर नगरपालिकाले कोभिड–१९ को रोकथामको निम्ति सक्दो प्रयास गर्दै आइरहेको छ । त्यसैगरी हामीले आयुर्वेदिक डाक्टरहरुसँग पनि समन्वय गरेर, नगरपालिकाले नै आर्थिक सहयोग गरेर आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरुको लागि औषधि वितरण गर्ने कार्य पनि शुरु गर्यौं । यति मात्र होइन नगरपालिकाले ख्वपः अस्पताल चलाइरहेको छ, हामीसँग ३० जना डाक्टरहरु हुनुहुन्छ । त्यसैगरी घरदैलो नर्स कार्यक्रम पनि संचालन गरिरहेका छौं । त्यसकारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै पनि समस्या आउने बित्तिकै अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर काम गरिरहेका छौं । कोभिडको बेला त्यो बेला अस्पतालले बिरामी नलिने, अस्पताल चाहार्दै चाहर्दै बिरामी मरेको खबर हामी सुन्ने गथ्र्यौ, त्यसकारण हामीले बिहान ७ः०० बजेदेखि बेलुकी ७ः०० बजेसम्म ओपिडी सेवा पुरा खुल्ला गर्यौं । हामीले १ दिन पनि हाम्रो जनस्वास्थ्य केन्द्र रोक्न परेन । लकडाउनको बेला पनि दैनिक २००, ३०० बिरामीको हामीले सेवा गर्यौं । अन्य सामान्य अवस्थामा ४००, ५०० बिरामीको हामीले सेवा गरेका छौं । अहिले आइसोलेसन सेन्टरहरु खाली भैसकेका छन् । अहिले कोभिड–१९का संक्रमितको रेकर्ड नगरपालिकामा आएको छैन ।
तपाईले भक्तपुर नगरपालिकाको नेतृत्व लिनु भएको पनि साढे तीन वर्ष भैसकेको छ । यस अवधिमा तपाईंले के कस्ता कामहरु गर्नुभयो ?
भक्तपुर नगर विश्व सम्पदा सूचिमा रहेको क्षेत्र हो । एउटा विश्व सम्पदा सूचिमा सुचिकृत सांस्कृतिक नगर, त्यसैले हाम्रो एउटा महत्वपूर्ण काम भनेको पुराना सम्पदाहरुको संरक्षण गर्नु हो । त्यसैले मौलिक प्रविधि र हाम्रै निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर हामीले सम्पदाहरुको पुनः निर्माणलाई जोड दिएका छाै । परिणामस्वरुप आज पाँच तले मन्दिर जस्ता विश्व प्रख्यात मन्दिरको जिर्णोद्धार सम्पन्न गरिसकेका छौँ, कुनै विदेशीको सहयोग विना सम्पन्न गरिसकेका छाै । त्यस्तै गरि भैरवनाथको मन्दिरको निर्माण कार्य पनि सम्पन्न गरिसकेका छाै‌ । लाकुढोका दरबार देखि लिएर भूकम्पपछि आज सम्म १०८ वटा सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ भने डेढ दर्जन सम्पदाहरु पुनःनिर्माणको क्रममा छन् । यो हिसावले भन्नुपर्दा हाम्रो मुख्य ध्यान सम्पदा पुनःनिर्माण र संरक्षणमा गएको छ । त्यसै गरि २५ बेडको फप अस्पताल हामीलाई स्वीकृति प्राप्त छ । अहिले ७६ करोडको लागतमा नगरपालिकाकै खर्चमा पाँच तले अस्पतालको भवनको निर्माण करिब करिब ढलान समेत भैसकेको अवस्था छ । भित्री कामहरु भैरहेको छ । छ आठ महिनामा त्यो सम्पन्न हुने आशा गरेका छौं । यो कुरा हाम्रो घोषणपत्रमा पनि उल्लेख थियो । त्यसैगरी हामीले निर्वाचनको बेलामा वाचा गरे अनुसार भक्तपुरको मुल सडकको ३ किलोमिटर बाटोलाई ढुङगा छाप्ने भनेका थियौं र त्यो काम पनि अहिले सम्पन्न भैसकेको छ । यसरी भन्दा हामीले सम्पदा संरक्षणदेखि विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाएका छौं । काठमाडौँको रानीपोखरी भन्दा ४० वर्ष अगाडि निर्मित भक्तपुरको रानीपोखरी ४० साल देखि नेपाली सेनाको कब्जामा रहेको थियो । हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि सेनासंग पटक पटक पत्राचार र छलफल गरी डेढ वर्ष पछि नगरपालिकाले नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि त्यो रानीपोखरी प्राप्त गरेका छौं । यसरी थुप्रै निर्माणका कामहरु भैरहेका छन् ।
तपाईंको नगरपालिकामा यो वर्ष प्रमुख प्राथमिकतामा परेका विकासका योजनाहरु के के छन् ? गत वर्षको विकास योजनाका कार्यलाई कोरोनाले के कस्तो असर पुर्यायो ?
कोभिड असर त संसारमै परेको कारणले गर्दा भक्तपुर नगरपालिका पनि अछुतो हुने त प्रश्नै भएन । तर भक्तपुर नगरपालिकाले कोभिड–१९ को बेला पनि धेरै मानिसहरु वेरोजगार हुने सम्भावानालाई देखेर विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दियो । विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दियाै‌, पुलहरु निर्माण शुरु गर्यौ । अहिले दुईवटा सम्पन्न भैसकेका छन् । अर्को निर्माणाधिन अवस्थामा छ । हामीले १६ सय ५३ रोपनी जग्गामा आवास निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौ । यो हिसाबले हेर्दा त्यतिबेला कोभिड–१९ ले केही असर त पार्यो नै, तर विकास निर्माणका कार्यमा धेरै असर पार्न सकेको हामीलाई लाग्दैन । तर आर्थिक हिसाबले भने ठूलो मारमा परेका छौँ । किनभने भक्तपुर विदेशी पर्यटकहरु आउने ठाउँ, वर्षकोे ३ लाख पर्यटक यहाँ आउँछन । सार्क मुलुकका संग पाँच सय प्रवेश शुल्क र अरुसंग हामीले १५ सय लिने गरेका छौँ। त्यसबाट पर्यटकहरुबाट मात्र वर्षको ३० करोड रुपैया हामीलाई आम्दानी हुन्छ । गत वर्ष हामीले केही आर्जन गरेका थियौं भने यो आर्थिक वर्षमा त शुन्य जस्तै भयो । किनभने गएको वर्षको चैतबाट लकडाउन नै छ । त्यसबेला सम्म हाम्रो १७/१८ करोड पैसा उठेका थियो त्यस पछि शुन्यतामा झरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा भने शुन्यतामै छ । यो हिसाबले भन्दा नयाँ नयाँ ठूला योजनाहरु हामीले शुरु गर्न सकेनौं । तर पनि अन्य योजनाहरु जति चालु छन् त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा हामीले अगाडि बढाईरहेका छौँ ।
तपाईं मजदुर किसान पार्टीको र देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । सरकारबाट नगरपालिकाको विकास निर्माण कार्यमा के कस्तो सहयोग पुगेको छ ?
पहिलो कुरा अहिलेको सरकारलाई हामी कम्युनिष्ट भन्दैनौ । नाम मात्रको कम्युनिष्ट हो, कांगे्रस भन्दा पनि एकखालको फरक नै छैन । त्यो कम्युनिष्ट भनेको नामले हुने हैन त्यो व्यवहारले हुने हो, सिद्धान्तले हुने हो । यो अर्थमा एउटा नामको कम्युनिष्ट पार्टी शासन गरिरहेको अवस्था थियो, अहिले पनि छ । तर सरकारबाट जुन हिसावले पालिकाहरुलाई र स्थानीय तहहरुलाई सहयोग गनुपर्ने थियो त्यो भैरहेको छैन । उदाहरणको निम्ति यति ठुलो कोरोनाको माहामारी चल्यो, स्थानीय तहले धेरैले आ–आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरे । तर सरकारले भने हाम्रो नगरपालिकामा पैसा पनि पठाएको छैन, यो खेदको विषय हो । प्रदेश सरकारले १२ लाख पठाएको थियो । जबकी करोडौ रुपैयाँ यसमा हाम्रो खर्च भएको छ । नगरपालिकाको निम्ति सबै पालिकाको निम्ति एउटा पत्र पठाइ दिए तर त्यो पत्रको निर्देशन पत्राचारका आधारमा कोभिड–१९ नियन्त्रण होला भन्ने जुन हिसाबले केन्द्रमा बसेर सोचेका थिए त्यो गलत हो । वास्तवमा व्यवहारिक रुपमा हामीले के गर्न सक्छौ भने हामीले ठूला ठूला आइसोलेसन केन्द्र किन नखोल्ने ? यस्तै बेलामा हाम्रा नीजि अस्पतालहरुले काम गरेनन् भने नीजि अस्पतालहरुलाई किन राष्ट्रियकरण नगर्ने, राष्ट्रियकरण गरेर जनताको किन सेवा नगर्ने भनेर त्यो एक्सनमा जानु पर्ने थियो सरकार । यो मामिलामा सरकार चुकेको हामीलाई लागेको छ । अहिले कर्मचारीहरु पठाइ दिन्छ ती कर्मचारीहरु पठाउने कामप्रति पनि हाम्रो विमती छ । किनभने कर्मचारी भनेको स्थानीय आवश्यकता अनुसार क्षमतावान व्यक्तिहरु राख्न पाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले केन्द्रबाट, प्रदेशबाट कर्मचारीहरु पठाउनु नगरपालिकाको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हो । जोसँग कर्मचारी एक जना राख्ने अधिकार छैन, जसले शिक्षकलाई नियुक्ति दिन सक्दैन भने त्यसलाई सरकार भन्नु उपयुक्त होइन । सरकारको अर्थ हो अहिलेको संविधानले कार्यापालिका व्यवस्थापिका र न्ययपालिका अहिलेका तिनै शक्तिको शक्ति सम्पन्न स्थानीय तह हो । त्यसो हुँदा हुदै पनि कर्मचारी र शिक्षकहरुको जो नियुक्ति, सरुवा, बढुवाको कुरामा माथिले अंकुस लगाउने काम गरेको छ त्यो एकदमै गलत छ । हामीले सरकारलाई तपाईहरुले हस्तक्षेप गरिरहनु भएको छ केन्द्र र प्रदेशको हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य हँुदैन भनी हामीले कैयौ कर्मचारीलाई फिर्ता पठायांै । तर आश्चर्यको कुरा के छ भने हामीले कर्मचारी फिर्ता पठाएको कारण हामीलाई आउने बजेटमा यती लाख कटौती भनेर पठाइदिन्छ । अब उहाँहरुले पठाउने कर्मचारी नलिएपछि हामीले कर्मचारीवापत पाउने तलब नपाउने भयौं । यो हिसाबले अहिले केन्द्र सरकारले जुन प्रदेश सरकार सँगको समन्वय हो त्यो राम्रोसँग अगाडी बढ्न सकिरहेको छैन । यो भक्तपुर नगरपालिकाको हिसाबले मात्र होइन देशैभरीका स्थानीय तहहरुको स्थिती यस्तै छ ।
भक्तपर ऐतिहासिक शहर हो । यहाँ पुराना भवन, मन्दिर, म्युजियम विद्यमान छन् । यसको ऐतिहासिकतालाई जोगाइराख्न के कस्ता कामहरु भैरहेको छन् ?
हाम्रो ध्यान यसैमा गैरहेको छ । हाम्रो अहिले सम्पदाहरु धेरै निर्माण भैरहेका छन् तर त्यो ठेक्कामा दिनुहँुदैन भन्ने मान्यता हामी राख्छाै‌‌ । ठेक्कामा दिएको निर्माण कमसल हुन्छ । निर्माण संरचनामा स्थानीयको अपनत्व हुँदैन । त्यति दिगोपन पनि हँुदैन । त्यसकारण भक्तपुर नगरपालिकाले निर्माण गर्ने या जिर्णोद्धार गर्ने वा पुनःनिर्माण गर्ने सबै काम उपभोक्ता समिति मार्फत गराईरहेका छौ । त्यसरी गर्दा खेरी श्रमदानको आव्हान गरिन्छ । त्यसमा आर्थिक सहयोगको आव्हान गर्छौ । एउटा एउटा मन्दिरको निम्ति पाँच देखि १५ लाख सम्म चन्दा उठ्छ । हजारौ जना मान्छेले श्रमदान गरेका हुन्छन् । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु हामीसँग छ । पाँच तले मन्दिरमा कमसेकम दुइ चार हजार जना मानिसले श्रमदान गरेका छन् । १५ लाख भन्दा बढी पैसा उठ्यो । अनि नगरपालिकाले अगुवाइमात्र गरेको छ र त्यसमा नगरपालिकाको लगानी पनि थियो । त्यस्तै अहिले भैरवनाथको मन्दिर बनाएका छौं । मन्दिरको पुनःनिर्माण या जिर्णोद्धार शुरु गरेका छौ । जिर्णोद्धारको क्रममा पनि हामीले चन्दा आव्हान गर्यौं । त्यसमा पनि पाँच छ लाख चन्दा उठेको छ । पठसाला मन्दिर पुनःनिर्माण गर्दा पनि पाँच छ लाख भन्दा बढी पैसा चन्दा स्वरुप उठेको छ । यसरी जनताको अपनत्व कायम गराउनको निम्ति र स्तरीय बनाउनको निम्ति नगरपालिकाले उपभोत्ता मार्फत काम गराई रहेको छ । उपभोक्ताकै बीचमा नगरपालिकाको पैसा जाओस् भन्ने नगरपालिकाको चाहाना पनि हो ।
कोरोनाको महामारीले नेपालकै पर्यटन व्यवसायलाई धरासायी पारेको छ । भक्तपुरमा यसको कस्तो असर देखिएको छ ?
यो विषयलाई अघि स्पष्ट पार्यौ । भक्तपुरमा करिब करिब वार्षिक ३ लाख जति पर्यटकहरु आउने ठाउँ हो । यो ठाउँमा पर्यटकहरु नआउँदा खेरी आर्थिक रुपमा त समस्या हुने नै हो । हामीले त्यो बेहोरी रहेकै छौं । त्यसबाट सृजित वेरोजगार मान्छेहरुका समस्याहरु छँदैछ । कोराना कालमा होटल व्यवसायीहरु, रेष्टुरेन्टहरु, विभिन्न सामान विक्री गर्ने विक्रेताहरु देखि लिएर हाम्रा गाइडहरु सबै बेरोजगार भए । हामीसँग ६२/६३ जना त नगरपालिकाले तालिम दिएका गाईडहरु छन् । यो हिसाबले प्रत्यक्ष रुपमा पर्यटकहरु नआउँदा कोभिड–१९ ले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु-याएको र हानी गरेको अनुभव गर्दछु ।
२०७२ सालको महाभुकम्पले भक्तपुरमा रहेका पुरातत्व महत्व बोकेको ऐतिहासिक धरोहरलाई क्षति पुर्याएको थियो । तिनीहरुको मर्मत सम्भार वा पुर्ननिर्माणको कार्यमा क कस्ता गतिविधिहरु भएका छन् ?
सुर्पै धरोहरहरु छन । हामिसँग ति धरोहर मध्ये तीन वटा बाकि छन बनाउनलाई त्यस देखि बाहेक १०८ वटा सम्पन्न गरिसकेका छौ । डेढ दर्जन जति निर्माणअधिनमै छन् । ठाउँठाउँमा गएपछि सबै तिर सास्कृतिक धरोहरहरु हामिले निर्माण गरिरहेका छौ । जिर्णदार गरिरहेका छौ । यो अर्थमा हामिले सक्दो पर्यास चाहि गरिरहेका छौ ।
भक्तपुरका प्रसिद्ध पर्व तथा महोत्सवहरु कुन कुन मुख्य हुन् ? यी सांस्कृतिक पर्वहरुलाई जोगाइराख्न के कस्ता प्रयासहरु भएका छन् ?
भक्तपुरमा कम्तिमा पनि १५ दिनको एउटा–एउटा जात्रा हुने गर्छ । पुर्णिमा या विभिन्न खालका विशेष जात्रा, पञ्चादान, संयोगमहादान जस्ता थुप्रै खालका जात्राहरु हुने ठाउँ हो । त्यसैले भक्तपुर नगरपालिकामा कोभिड–१९ लाई ध्यानमा राखि त्यस्तो धेरै मानिसहरु जम्मा गरेर कुनै पनि काम नगरौं भनेर आव्हान गरेका थियाै‌ । जस्तै विस्केट जात्रा र भैरवनाथ जस्तो जात्रामा जहाँ हजारौं मानिसहरु उपस्थित हुने गर्दथे, हामीले धेरै मानिसहरु जम्मा नहोऔं भनेर आव्हान गरेका थियौं । हामीले प्रचाहरु वितरण गरेका थियौं । सूचनाहरु प्रवाह गरेका थियौं । त्यसले गर्दा कोहि मानिसहरु निस्केनन् । यसरी हरेक पर्वलाई एउटा औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्ने प्रयास ग¥यौं । ठूला चाडपर्वहरुलाई दुइचार मानिस बसेर पनि हामीले सम्पन्न गरेका थियौं । यो कोभिड–१९ लाई ध्यानमा राखेर यहाँका नगरबासीहरुले नगरपालिकाले आव्हान गरेको कुरालाई ध्यानमा राखेर अलिकति पनि अनुसासिनहिन भएर, वेवास्ता गरेर कार्य गर्नुभएन जुन नगरपालिकाको ठूलो उपलब्धि हो । यहाँका जनताको स्वास्थ्यको निम्ति हामीले काम ग-यौं । यो स्वास्थ्यको निम्ति काम गरिरहँदा जनताले उनीहरु हाम्रो साथमा छन् भनेर भन्दा हामी अत्यन्तै खुशी छौं । यसर्थ जुन हिसाबले यो कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहेको थियो त्यो चाहिँ भक्तपुरमा शायद बढ्न पाएन ।
पर्यटनमा आश्रित रहेर जिवीकोपार्जन गरेका व्यवसायीहरु अहिले निकै मारमा परेका छन् । तिनीहरुलाई राहत दिनका निम्ति के कस्ता कार्यहरु भएका छन् ?
उहाँहरुको निम्ति छुट्टै राहत प्याकेज त हामीले बनाएनौं । अहिलेको समय भनेको तयारीको समय हो । भोलि विदेशीहरु नेपाल आउने बित्तिकै भक्तपुर त आउँछन नै । भक्तपुर भनेको पर्यटकीय शहर हो । यो समय भनेको तयारीको समय हो । त्यसकारण सरसफाइ देखि लिएर सम्पदाको पुर्ननिर्माणका काममा नै जोड दिइरहेका छौं । भोलि विदेशी आउने बेलामा कुनै पनि तरिकाले हामीमा कमी छैन भनेर देखाउनको लागि हामी तयारी अवस्थामा छौं ।
अन्तमा, तपाईंको बाँकी कार्यकालमा भक्तपुरको विकास निर्माणका कार्यमा कस्ता कस्ता योजनाहरु अगाडि सार्नु भएको छ ?
हामीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट निर्वाचित हुँदा घोषणापत्र अनुसार काम गर्छौ भनेर जनतालाई बचनबद्धता व्यक्त गरेका थियाै‌ । त्यही वचनबद्धता अनुसार हामी एक एक गर्दै काम गरिरहेका छौ । अहिले केही कामहरु गर्न बाँकी छन् । जस्तै हाम्रो यो नगर भनेको खोलाले घेरिएको नगर हो । उत्तर तिर हेर्नेे हो भने खासंसुसं खोला छ, दक्षिण तिर हेर्ने हो भने पुरै हाम्रो भानुमन्ते खोलाले घेरिएको छ । यो दुइटा खोला मात्र राम्रो सफा भयो भने त्यो असाध्यै राम्रो ठाउँ हुन्छ वातावरणीय हिसाबले । दुइवटा खोलालाई सुधार गर्नलाई सक्दो प्रयत्न नगरपालिकाले गरिरहेको छ । खोलामा अलिकति पनि ढल बग्न नदिनाको निम्ति खोलाका किनारहरुमा ढल करिव करिव राखिसकिएको अवस्था छ । यो पुरा हुन डेढ वर्ष लाग्न सक्छ तर सम्पन्न भैसकेपछि फोहोर ढल खोलामा खस्दैन । त्यसपछि खोलामा स्वच्छ र सफा पानी बग्छ । यो काम गर्न हामी अझै पनि लागिरहेका छौं । त्यस्तै गरि दुई वटा उपचार पोखरीहरु रहेका छन भक्तपुरमा । हामीले घोषणापत्रमा पनि राखेका थियौ की हामी निर्वाचित भैसकेपछि ती दुई वटा उपचार पोखरीहरुलाई संचालनमा ल्याउने छौं । अहिले दुई वटै निर्माणाधिन चरणमा छन् र एउटाको निर्माणको चरण सुरु भैसकेको छ । अर्को कागजमा कामहरु भैरहेका छन् । त्यसै भनिरहँदा यो हाम्रो निम्ति चुनौतीको विषय हो । अब भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वपः विश्वविद्यालय संचालन गर्ने भनेर जुन जनताको बीचमा हामीले भन्दै आएका थियांै त्यो अहिले सरकारको पक्षपातको व्यवहारले गर्दा आज सम्म पनि हामीले स्वीकृत पाउन सकेका छैनौं । ख्वपः विश्व विद्यालय बनाउने भक्तपुरका जनताको सपना पुरा गर्न हामी कोसिस गरिरहने छौ । कलेजहरु ६ वटा नगरपालिकाले संचालन गरिरहेको थियो हामीले त्यसलाई नयाँ नयाँ विषय हरु राख्ने क्रम जारी राखेका छौं । अहिले इन्जिनीयरिङ कलेजमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ थपेका छांै । ख्वपः कलेजमा हामीले कानुनको कक्षालाई थप संचालन गरेका छौं । करीब करीब देशका ६ हजार विद्यार्थीहरु हाम्रा कलेजहरुमा पढ्छन् । देशको एउटा स्तरिय कलेजका रुपमा हाम्रा कलेजहरुका नाम आउँछ, यसमा हामीलाई खुशी लाग्दछ । त्यसैले अझै त्यसैलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउने हाम्रो योजना रहेको छ । हामीले मुख्य कुरा जनचेतना अझै माथि उठाउनु पर्छ । शिक्षा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । स्वास्थ्यलाई एकदमै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । शिक्षा स्वास्थ्य नागरिकहरुको अधिकारकै हिसाबले भक्तपुर नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ र निरन्तर काम गरिरहने छ ।
अन्त्यमा के भन्न चाहानु हुन्छ त ?
भक्तपुरबासी सम्पूर्ण दाजु भाइ तथा दिदि वहिनी र भक्तपुर बाहिर बस्नु भएका सम्पूर्ण नागरिकहरु अहिले यो कोभिड–१९ को समय छ । अहिले पुरै नियन्त्रण भइसेको छैन । हामी कोभिड–१९ देखि डराएर भागिभागि हिड्नु भन्दा कोभिड–१९ बाट सुरक्षित भएर आफ्नो नियमित कामलाई संचालन गरेर अलिकति तपाईको हेलचेक्र्याईले हाम्रो लापरवाहीले देशका साह्रा जनताले दुःख पाउन सक्छन् । हामीले धेरै दुःख गरिरहेका छौं । यत्रा ठूलाठूला महाशक्ति भनिएका देशहरुमा लाखौ लाख मान्छेहरु मरिरहेका छन् । रोगको उपचार गर्न नसके पछि छटपटाइ रहेका छन भने त्यस्तो स्थिति नेपालमा आयो भने हाम्रो स्थिति के होला ? त्यसैले बेलैमा सोचाै‌, सबै सुरक्षित हुनुहोस । तपाई हामी सुरक्षित भयौँ भने यो समाज सुरक्षित हन्छ । त्यो तपाइको हातमा छ र हाम्रो हातमा छ । हामी सबै मिलेर कोभिड–१९ लाई पुर्णरुपमा नियन्त्रण गर्दै विकासको गतिलाई पहिले भन्दा तिव्र गतिमा अगाडि बढाउनको लागि म आग्रह गर्न चाहान्छु । साथसाथै यस पालिका न्युज परिवारलाई भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।